Khilaafka doorashadii Jubbaland: Axmed Madoobe maxay yihiin afarta qodob ee ugu muhiimsan ee uu ka hadlay - BBC News Somali
Khilaafka doorashadii Jubbaland: Axmed Madoobe maxay yihiin afarta qodob ee ugu muhiimsan ee uu ka hadlay
Axmed Badar BBC Somali
Hadalkii madaxweynaha Jubbaland, Axmed maxamed Islaam ee shalay aad ayuu u dheeraa. Haddaba si gaar ah wax uga ogow qodobbadii uu sida gaarka ah carabka ugu adkeeyay.
Axmed Madoobe wuxuu hadlayay 28 daqiiqo wuxuuna u muuqday qof aad u dhaliilay siyasadda dowladda fedaraalka ah ee ku wajahan Jubbaland.
Aan qodob kasta si gaar ah u soo qaadno haddaba.
"Jubaland Kama jiri karaan madaxwaynayaal"
Axmed maxamed Islaam oo qaar ka mid ah musharrixiintii doorashadii Jubbaland ay diidan yihiin guushiisa, ayaa ka digay in wax loo "dhimo amniga jubbaland".
Wuxuu si gaar ah fariin ugu diray musharaxiintii kale ee iyaguna sheegtay in ay yihiin "madaxwaynaha Jubbaland".
"Xaaladeeda amni waa muqadas in la ilaaliyo. (Jubbaland) kama jiri karaan madaxwaynayaal iyo dowlado iyo cid kale oo wax sheeganaysa ", ayuu yiri Axmed Madoobe.
Wuxuu intaa ku daray in "cid kasta oo amniga qalqal galinaysa aan lo dulqaadan doonin".
"Waan bixinaynaa wixii fursad ah; cidda rabta in la qanciyo waan soo dhawaynaynaa; ciddii isku dayda iney amniga qalqal galiso looma dulqaadanayo", ayuu yiri Axmed Madoobe.
Siyaasiyiinta kale sidey u arkaa hadalka Axmed Madoobe?
Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Cabdirashiid Maxamed Xiddig ayaa sheegtay xilka "madaxweynaha Jubbaland", kuwaas oo weli ku sugan Kismaayo.
Seeraar oo la hadlay BBC Somali, ma uusan soo dhoweyn ereyada Axmed Madoobe wuxuuna sheegay in "wax walba oo Jubbaland ka qaldamay uu masuuliyadeedu qaadayo Axmed Maxamed islaam".
"Marka aan ka hadlayno doorashooyiinka Jubbaland, Axmed Wax waliba oo qaldamay isaga ayaa qaadaya ", ayuu yiri.
Image caption Seeraar wuxuu horey ula shaqeyn jiray maamulka Jubbaland, balse hadda wuxuu sheegay in isagana "madaxweyne" loo doortay.
Cabdinaasir Seeraar ayaa dhanka kale sheegay in wadaxaajoodka uu madaxwaynaha Jubbaland ku baaqay aysan "waligood diidin" balse "qalad kasta oo dhaca uu masuul ka yahay Axmed Madoobe".
Axmed Madoobe wuxuu tilmaamay in doorashada loo maray "waddadii sharciga ahayd ee dastuurka waafaqsan".
Waa fikrad ay ku khilaafsan yihiin dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegtay in aysan aqoonsanayn natiijadii ka soo baxday doorashada iyo siyaasiyiinta dhaliishan maamulkiisa.
Balse Axmed Madoobe wuxuu carabka ku adkeeyay: "Jubbalanda ayaan ka wadahadalnay oo waxaan niri 'dastuurka ha la raaco'. Xuquuqda uu sharciga na siinayo aan u marno geedi socodka oo dhan ayan isla qaadanay, intii dad la soo xareeyay ayaa lagu yiri 'qof walow ha tagin'", madaxweynaha Jubbaland.
Seeraar: "Jubbaland waxay u baahantahay qof aniga oo kale ah"
Wuxuu dowladda ku eedeeyay in ay isku deyday in "faragelin" ay ku sameyso doorashadii ka dhacday Kismaayo ee la isku khilafay.
Laakiin Dowadda federaalka ayaa horey u sheegtay "in hannanka uu maray guddiga doorashada Jubbaland uusan waafaqsanayn midka dastuurka dalka".
Xarigga Cabdirashiid Janan
"Wasiir baa hadda la xiray. maxaa lagu xiray? wasiirkii amniga oo howl shaqa ku jira ayaa loo yeeray oo la yiri kulan baan rabnaa inaan kula qaadano. Markii uu soo degayna waa la qabtay", ayuu yiri Axmed Madoobe oo ka hadlayay xarigga cabdirashiid janan.
Image caption Xarigga Cabdirashiid Janan waxaa soo dhoweysay hay'adda u doodda Xuquuqda Adaanaha ee Amnesty International
Wasiirka Amniga Jubbaland oo ay xirtay dowladda ayaa lagu eedeeyay "dembiyo kala duwan" inkastoo weli aan maxkamad la soo taagin.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay "in uu sharci darro ku xiran yahay" Janan oo uusan galin wax dambi ah.
Wuxuu yiri: "Maxkamad baa horey ugu yeertay oo la yiri dad baa la dilay 4-tii bishii April. Waxay qortay maxkamad in lagu waayay dambiyadii wasiirka loo haystay ".
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in isaga shakhsiyan aysan saameyneyn amamarka diyaaradaha ee lagu qasbay in Muqdisho ay maraan.
Wuxuu yiri: "Waa ayo cidda la cunaqabateynayo, maanta haddii aan doono, aniga oo aan iyaga fasax ka qaadan ayaan meeshaan doono aadayaa. Haddii ay barito igu dhalato waan safri karaa, yaa la cunnaqabataynayaa ".
Dowladda Federaalka ayaa diyaradaha ku sii jeedo Kismaayo iyo kuwa gudaha dalka ku amartay in ay maraan magaalada Muqdisho taas oo sababtay in "qiimaha uu sare u kaco", sida ay BBC u sheegeen qaar ka mid ah shirkadaha iyo dadka raaca.
Axmed Madoobe wuxuu ku adkeystay in shacabka ay saameyn weyn ku yeelatay xayiraadda oo weli dowladda Federaalka aysan faafaahin ujeedada loo soo saaray amarka.